Ishidi le-PC Solid / Ishidi Elingenalutho I-extrusion Line - CHEER
Ishidi eliqinile le-PC libizwa nangokuthi ibhodi lokukhuthazela le-PC (elaziwa nangokuthi ibhodi lokukhuthazela le-Cablon, ibhodi eliqinile le-polycarbonate, ingilazi ye-PC bulletproof, ibhodi eliqinile le-PC, ibhodi le-polycarbonate) lenziwe ngokusebenza okuphezulu kobunjiniyela beplastikhi-polycarbonate (PC) Become. Ipuleti lokukhuthazela licindezelwa laba yigagasi ukuze libe yithayela eliqinile lokukhuthazela. Ngo-2018, ubuchwepheshe obusha bezobuchwepheshe buvumela ibhodi lokukhuthazela le-pc ukwengeza i-resin eqinisiwe ukuvikela ibhodi lokukhuthazela ekukhuleni okushisayo nasekuqhekekeni kokuncipha
Izici zebhodi lokukhuthazela le-pc: ukumelana nomthelela, ukumelana nomthelela, okungenakuqhekeka: amandla adlula ukuqiniswa
Izikhathi ezingamakhulu ingilazi namashidi e-acrylic anzima, aphephile, aphikisana nokweba, futhi avimbela izinhlamvu.
Kungavulwa kube yindilinga futhi kugoqeke: Ukusebenza okuhle, upulasitiki oqinile, futhi kungagotshwa kube yimengamo, amasentimitha, njll ngokuya ngezidingo zangempela zesiza sokwakha.
I-JIAHAO ithole ithimba lobungcweti ukwenza ngcono imishini ye-PC ishidi, inganikeza ngomshini omuhle kakhulu we-performace we-PC SOLID SHEET, i-PC HOLLOW SHEET, i-PC WAVE SHEET, i-PC SHEET SHEET